« Lalaovina » -
AccueilTresaka« Lalaovina »
« Lalaovina »
17/04/2018 admintriatra Tresaka 0
Na hodiovina amin’ny rano firy barika aza, tsy hadio intsony izany Ravalomanana sy Rajoelina izany. Mbola trosa tsy mety voafafa manaraka ny volon-kodiny eny foana ny raharaha 2009 izay mahavoasaringotra azy mirahalahy. Nisy fahafoizana ain’olona tamin’izany. Nisy fahapotehana fananan’olona tamin’izany, ary fahaverezana asa ihany koa. Tsy misy afa-tsy izy mirahalahy mianaka ireo no tompon’antoka. Efa mandeha moa ny raharaham-pitsarana, ary misy ny namoahana didim-pitsarana. Na ny namoahana didim-pitsarana toa an-dRavalomanana na ny nanome tso-drano ireo mpandroba tamin’izany toa an-dRajoelina dia samy maloto eo anatrehan’ny Malagasy. Tsy madio eo anatrehan’ny sehatra politika. Tahaka ny mpivarotra saribao avy nandroaka saribao amin’ny Tanana, ka tsy hadio mihitsy raha tsy sasana amin’ny vovon-tsavony sy rano amin’ny siô.
Ny loton-tsaribao amin’ny tanana no azo diovina. Ny rà latsaka kosa dia tsy hadio na oviana na oviana. Ankehitriny anefa, mbola tsy nikombona akory ny fery napetrak’ireto filoha teo aloha ireto dia indreo fa miverina amin’ny fomba ratsy indray. Hafa kely ny fomba fiadin’izy ireo satria tsy ry zareo mivantana no manatanteraka an’ilay izy fa ny olomboafidy manara-dia aminy . Hafenina amin’ilay resaka hoe fanaovana tatitra amin’ny vahoaka kanefa ny hanongam-panjakana no tanjona. Raha hanao tatitra ny depiote isaka ny boriboritany, maninona tsy any amin’ny boriborintany misy azy any.
Na izany aza dia tafahoatra loatra ny fitiavam-pahefan-dry Rajoelina sy Ravalomanana ka tsy manan-tsaina afa-tsy ny fampidirana korontana. Ireto solombavambahoaka hampiasainy ireto koa aloha no tokony ho tonga saina, satria matoa manaiky hampiasainy dia manohana ny famotehana an’Antananarivo ihany koa. Raisina ho famotehana an’Antananarivo Renivohitra ny fanaovana famoriam-bahoaka tsy nahazoana alalana eny amin’ny 13 mey. Magazay sy trano fivarotana avokoa mantsy no eny ka hanome vahana ny mpandroba sy ny mpanararaotra. Tsy misy vahoaka hanaiky hopotehana izany, ka tokony ho tonga saina ihany ireo depiote manohana an-dRavalo sy Rajoelina ireo mba tsy ho lasa saribakoly sy kilalaon’ny mpanao politika fotsiny.